Ny ady mandrakizay miaraka amin'ny andian-tsarimihetsika 'Pencil vs Camera' an'i Ben Heine | Famoronana an-tserasera
Tsaroako fony aho nianatra tao amin'ny ESDIP tamin'ny 2002 rehefa nanome 3D tamin'ny 3D Studio Max izahay, fa mbola misy mpiara-mianatra sasany izay somary misalasala ny sarimiaina 3D Nanomboka nampiseho izay nanjary hatramin'izao izy io.
Una ady eo amin'ny sary mihetsika nentim-paharazana sy nomerika azo afindra amin'ny sary sy taratasy koa ity andiany ity naroson'i Ben Heine ary nantsoiny hoe 'Pencil vs Camera'. Teknika mifangaro amin'ny faran'ny andro izay mampiseho amintsika ny sary pensilihazo amin'ilay sehatra iray ihany no naka sary sy nafangaro kanto.
Nisy endrika sy fitaovana vaovao tonga teny an-dàlana mamaky ny kanto plastika nentim-paharazana kokoa. Raha hiverenana amin'ireo lahateny ireo aho dia tadidiko tsara ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko izay nilaza fa ny hetaheta nentim-paharazana dia tsy hihoaran'ny 3D ary andro vitsivitsy monja io. Ankehitriny ny ankamaroan'ireo sarimihetsika mihetsika noforonin'ireo studio lehibe dia vita amin'ny 3D.
Noho io antony io dia mifangaro ny andian-tantara noforonin'i Heine ireo fifandonana eo amin'ny tontolo roa, iray lehibe kokoa ary iray vaovao. Amin'ny sary samy hafa sy amin'ny sary samihafa, dia afangarony ny seho samihafa mba hanokafana fitambarana tsara eo alohantsika ary hanambatra ireo teknika roa tena samy hafa ireo izay mihaona indray ao amin'ny andiany.
Una fomba tsara hidirana inona ireo tontolo roa miovaova nefa saika mihodina amin'ny zavaboary kanto mitovy, sy ny faniriana hilaza hafatra sy hitantara tantara.
Manana ny Deviant Art hatrany Heine ka hatrany araho ny asany ary mahita sanganasa famoronana bebe kokoa toa ireo izay mahavita ity lahatsoratra ity.
Raha tianao ny sary mamorona, avia eto. Mikasika ny sary, Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Adin'ny Titans ao amin'ny andian-tsarimihetsika 'Pencil vs Camera' an'i Ben Heine